एमालेको नेपाल-खनालले लेखेको ५ बुँदे असहमति पत्रमा के छ ? – Khabar Patrika Np
एमालेको नेपाल-खनालले लेखेको ५ बुँदे असहमति पत्रमा के छ ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत्र ०७, २०७७ समय: १७:१२:३९
काठमाडौं । एमालेको माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले शनिबारको संसदीय दलको बैठकमा सहभागिता नजनाई ५ बुँदे पत्र बुझाएको छ । बालुवाटारमा एमाले संसदीय दलको बैठक बसिरहेको बेला नेपाल-खनाल पक्षका तीन सांसदले पत्र बुझाएका हुन् ।
पत्र बुझाउन सांसदहरु सोम पाण्डे, यज्ञराज सुनुवार र जीवनराम श्रेष्ठ बालुवाटार पुगेका हुन् । उनीहरु पत्र बुझाएर बैठकमा सहभागी नभई फर्किएका थिए । पत्रमा पछिल्ला दिनमा ओलीको सक्रियतामा गरिएका निर्णयहरुको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको छ ।
साथै, बैठक बस्‍ने स्थानको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । पत्रमा विधान, विधि, पद्धति, प्रक्रिया र स्थापित अभ्यास अनुरुप आयोजना हुने संघीय संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भई एमालेलाई संघीय संसद्‌‍मा एकताबद्ध रुपमा अघि बढाउन कटिबद्ध रहेको भनिएको छ ।